ယွန်းချစ်တဲ့ ဖေဖေ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသူ – ဘူးခါးသီး
“ဖေဖေရေ ယွန်းပြန်လာပါပြီ .. ဆောရီး ဖေဖေရယ် ဒီနေ့စျေးဝယ်တာ နောက်ကျလို့ ဟင်းလေး ကဗျာကရာ ချက်လိုက်မယ်နော်”
“ရေလေးအရင် သောက်ပါအုန်းကွယ် ပေး သမီးအိတ်တွေ ဖေဖေထားပေးမယ်”
ဖေဖေပေးတဲ့ ရေခွက်ကို ယူကာသောက်ရင်း ဖေဖေ့ကို ပိုက်ဆံအိတ် ပေးလိုက်သည်။ ကျမ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မေမေဆုံးသွားတော့ သားအဖနှစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ မေမေမရှိလို့ ဖေဖေက ကျမအတွက် အရာရာပါပဲ။ ဖေဖေကို အရမ်းချစ်သည်။ ယောက်ျားယူဖို့လည်း မစဉ်းစားပါ။
ကျမအလုပ်လုပ်တဲ့ ဘဏ်မန်နေဂျာက ကျမကို အတင်းကြိုက်ပေမယ့် ကျမစိတ်ထဲ ဖေဖေပဲရှိသည်။ ကျမက ယွန်းဝတီ အသက် ၂၂ နှစ် ပြည့်ပြီးပြီ။ ဖေဖေက ဦးအောင်ထွန်း။ အသက်က ၄၅။ အသားဖြူဖြူ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ခန့်ချောကြီး။
ဖေဖေက အကောက်ခွန်ဌာနက ညွှန်မှူးတစ်ယောက်ပါ။ တစ်သက်လုံး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ကျမကို ရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့သူ။ ဒါပေမယ့် တစ်ပါးသူ ချောက်တွန်းမှုကြောင့် အမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှုပြီးလို့ ဖေဖေမှန်မှန်းသိပြီး ဆိုင်းငံ့တာဝန်ကို ဖယ်ဖျက်ကာ အလုပ်ပြန်ခေါ်ပေမယ့် ဖေဖေက စိတ်နာပြီး အလုပ်ပါ ထွက်လိုက်သည်။
ကျမကလည်း မနှစ်ကစပြီး ဘဏ်မှာ အကြီးတန်းစာရေး ဝင်လုပ်နေပြီး ဖေဖေ့ကို တစ်လှည့် ပြန်လုပ်ကျွေးနေပြီလေ။ ဖေဖေ တစ်သက်လုံး ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်ပြီး စုဆောင်းလာသမျှရယ် အခု ကျမရတဲ့ လစာရယ်ဆို သားအဖနှစ်ယောက် စားလောက်ပါသည်။ အလုပ်မရှိရင် မနေတတ်သူမို့ နားပါတော့လို့ ပြောပေမယ့် ဖေဖေကမနား။ အိမ်မှာ မိတ္တူဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး စာစီစာရိုက် ဖိတ်စာလုပ်နဲ့ လုပ်ငန်းလေးတစ်ခု လုပ်နေသည်။
ဒီလို သားအဖနှစ်ယောက်နေလာရင်း တစ်နေ့မှာ ကျမနဲ့ ဖေဖေ့ကြား ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အာ့ကတော့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ သွေးသားရင်း လိင်ဆက်ဆံမိကြတာပါပဲ။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုရှင့်။ အဲ့နေ့က ကျမလည်း သိပ်နေမကောင်းလို့ ရုံးမသွားဘဲ အိမ်မှာပဲနေပြီး ညဘက်မှာ ဖေဖေက သူ့သူငယ်ချင်းတွေ သူ့အရင်အလုပ်က တပည့်တွေ အတင်းတိုက်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ သောက်လာတယ်။ အရင်ကတည်းက ဖေဖေလုပ်သမျှ မကန့်ကွက်တဲ့ကျမ ဖေဖေအရက်သောက်တာကိုလည်း မတားပါ။ ဖေဖေက စည်းကမ်းရှိပြီး သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းသိမ်းတဲ့ လူရိုးလူအေးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့နေ့က များပြီး သူ့တပည့်တွေကတောင် တွဲပို့ရတဲ့အထိ သောက်လာတယ်။
ကျမ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဖေဖေ ဒီလိုမူးပုံမျိုးကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဖူးခြင်းပါပဲ။ ကျမလည်း အံ့သြပြီး ဖေဖေ့ကို တွဲကူကာ သူ့အခန်းထဲထိပို့ ကုတင်ပေါ် တင်ပေးရတယ်။ ဟိုလူတွေ ပြန်သွားတော့ တံခါးတွေပိတ်ပြီး ဖေဖေ့ကို အိပ်ယာ မပြင်ပေးရသေးလို့ ပြင်ပေးဖို့ ဖေဖေ့အခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုအခန်းထဲ ဝင်လိုက်ခြင်းဟာ ကျမရဲ့ အပျိုစင်ဘဝလေး ကိုယ့်အဖေအရင်းဆီမှာ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရမယ်ဆိုတာ ကျမ မသိလိုက်ဘူးရှင်။
ဖေဖေ့ကုတင်ပေါ်တက် ခြင်ထောင်လေးချပြီး ခြင်မဝင်အောင် ဖျာအောက်ကို ခြင်ထောင်သွင်းနေတုန်း ရှိသေးတယ်။ မူးနေပေမယ့် သန်မာလှတဲ့ ဖေဖေ့ လက်မောင်းကြီးနဲ့ ကျမခါးကို ဆွဲဖက်ပါတော့တယ်။
“အို ဖေဖေ သမီး အိပ်ယာပြင်နေတယ်လေ အို အို”
” မခင်အေး အိပ်ယာ နောက်မှပြင်ကွာ အစ်ကို မနေနိုင်တော့ဘူး”
ဖေဖေက ကျမကို မေမေနဲ့မှားပြီး အတင်းဆွဲလှဲကာ တက်ခွတော့သည်။
“အိုး ဖေဖေ သမီးလေ သမီးပါ မေမေ မဟုတ်ဘူး လွှတ်ပါ ဖေဖေ အီး”
“မိန်းမကလည်းကွာ အစ်ကို မနေနိုင်တော့ပါဘူးဆို ကဲ”
“ဖေဖေ ဖေဖေ အုအုပြွတ်ပြွတ်အွတ် အု ဖေ အွတ်ပြွတ်ပြွတ် ”
ဖေဖေက ကျမကို အတင်းနမ်းတော့သည်။ ကိုယ်လုံးသေးတဲ့ ကျမ ဖေဖေ့ကို မတွန်းလှန်နိုင်ပါ။ ကျမမျက်နှာအနှံ့ အနမ်းတွေ ချွေချပြီး နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ဆွဲစုပ်ခံလိုက်ရတော့သည်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အခုလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နမ်းရှုံ့မှုကိုမပြောနဲ့ ယင်ဖိုတောင် မသန်းဖူး မကြုံဖူးတဲ့ကျမ ဖေဖေ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ လာထိတော့ အညှို့ခံလိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်လို ငြိမ်မိသွားသည်။ အသိ သတိလည်း မရှိတော့တဲ့အပြင် ဖေဖေသောက်ထားတဲ့ အရက်နံ့ကြောင့် ပိုပြီး ခေါင်းထဲရီဝေ နောက်ကျိ မွှန်ထူသွားတော့သည်။ ငိုရုံကလွဲပြီး အခြားလုပ်စရာမရှိ။
အနမ်းပြင်းပြင်းတွေကြောင့် ငိုရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် မိန်းမော သာယာမိသလိုလို ရှိသည်။ ဖေဖေ့ လက်ကြီးတွေက မြန်ဆန်ပြီး ကျမတောင် ရေချိုးမှသာ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လေ့ရှိတဲ့ ကျမရဲ့ နို့လေးတွေကို ညှစ်တော့သည်။ ကြမ်းကြမ်းညှစ်တော့ နာသလိုနဲ့ ထပ်အညှစ်ခံချင်မိသည်။ နို့မှမဟုတ် ပေါင်ကြားထဲလည်း လက်နှိုက်ကာ အမွှေးစုစုလေးကိုဆွဲကာ ကျမရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်တော့သည်။
ကျမ မိန်းမောနေစဉ် တခဏအတွင်း ကျမတစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်အစား မရှိတော့။ အိမ်နေရင်း အဝတ်အစားများသာ ဝတ်ထားလို့ ချွတ်ရတာ လွယ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျမ သတိဝင်လာတော့ ကျမကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေပြီ။ သူ့ပုဆိုးပါချွတ်ကာ ကျမပေါင်လေးကို ဆွဲကားကာ ကျမအဖုတ်လေးကို သူ့ဒစ်ကြီးနဲ့ ပွတ်ဆွဲလေသည်။ ကျမ ဖေဖေ့ကို တားမရတော့ပါ။ ကျမဘဝက ဖေဖေကျွေးမွေးပြုစုလို့ လူဖြစ်လာရတဲ့ဘဝမို့ အခု ဖေဖေမူးကာ ကျမကို မေမေနဲ့မှားပြီး လိင်ဆက်ဆံဖို့ လုပ်တာကို မတားတော့ပါ။ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ပါစေတော့။ ဖေဖေ့ကျေးဇူး ကျမတစ်ကိုယ်လုံး အသွေးအသားနဲ့ ဆပ်မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တော့သည်။
ဖေဖေ့ဒစ်ကြီး ကျမအဖုတ်ကို လာထိတော့ တကိုယ်လုံး ကျဉ်တက်သွားပြီး အထဲက ယားလာကာ အရည်စို့လာသည်။ ဒစ်ကြီးနဲ့ ပွတ်ဆွဲပြီး အဖုတ်ဝလေးမှာ တေ့ကာ ထိုးထည့်တော့သည်။
“အားးး ဖေဖေ အားးး နာတယ် အဟင့်အဟင့် အားးး”
ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို သူလိုးသွင်းနေကြ မေမေ့စောက်ဖုတ်လို့ ထင်ပြီး သွင်းလားတော့မသိပါ။ အတင်းကို ဖိသွင်းတော့သည်။
“ဗြစ် တစ် တစ် ဗြစ် ဗြစ် ”
ဖေဖေ့လီးကြီး ကျမစောက်ဖုတ်ထဲ တိုးဝင်လာတော့ မဆန့်မပြဲနဲ့မို့ မတရားနာလို့ စိထားတဲ့ ပေါင်လေးကို သက်သာလိုသက်သာငြား ကားပေးလိုက်မိသည်။ အပေါ်က ကျမနှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက် နို့လေးနှစ်ဖက်ကို တစ်ပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့လိုက်နဲ့မို့ အနာသက်သာသလိုရှိသည်။
သူ့လီးကြီးကို ဝင်သလောက် အသွင်းအထုတ်လုပ်ကာ လိုးသွင်းပြီး ကျမအပျိုစင် အမှေးပါးလေးကို ထောက်မိပြီး ပေါက်ထွက်ကာ လီးကြီးတစ်ဆုံး ဝင်လာတော့သည်။ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ပြည့်ကြပ်သွားသလို ခံစားရသည်။ အပျိုအမှေးပါး ပေါက်သွားလို့ နာကျင်သွားပေမယ့် တစ်ခဏအတွင်း ထိုအရသာကို နှစ်ခြိုက်လာသည်။
ဖေဖေက ခဏသာငြိမ်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲ မဆန့်မပြဲနဲ့ လိုးသွင်းသည်။ ကြီးမားတဲ့ ဖေဖေ့လီးကြီးကြောင့် နာကျင်လှပေမယ့် ထိုလီးကြီးမှပေးတဲ့ အရသာကို စွဲလမ်းသလိုလို ရှိလာသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို ညှစ်ကြည့်လေ ဖေဖေက ပိုဆောင့်လေပင်။
“အားး ရှီးး မခင်အေးရယ် ကောင်းလိုက်တာ ကြပ်ထုတ်နေတာပဲကွာ”
“အီးးး ဖေဖေ အားးး သမီးပါ အင်းးး ဟင်းးး ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်.. နာလိုက်တာ အဟားးးး အီးးးး သေပါပြီ အားးးးး ဖေဖေရယ် အားးးး”
ဖေဖေ အသွင်းအထုတ်လုပ်သလို စည်းချက်အလိုက် ကျမဖင်လေးကို မြှောက်ပင့်ပေးနေမိသည်။ အခုချိန်မှာ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လာတားတား မရတော့ပါ။ ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲ ဖေဖေ့လီးကြီးနဲ့ လိုးပေးတာကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်သွားသည်။ လူ့ဘောင်ရဲ့စည်းကို ကျော်လို့ အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုလည်း ပေးကြပါစေတော့။ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို ဖေဖေ လိုးပေးတာ အမြဲခံချင်နေတော့သည်။
အိမ်သာသွားတဲ့အခါ ရေချိုးတဲ့အခါ ပွတ်သပ်ဆေးကြောမိတာပဲရှိလို့ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ မဆိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတော့ ပြီးတယ်ဆိုတာကို မသိပါ။ ဖေဖေ အကြိမ်ငါးဆယ်လောက် ဆောင့်လိုးပြီးတော့ ကျမခါးကော့ကာ ခြေတွေကုပ်တက်တာတော့ မှတ်မိသည်။ ကျမတစ်ကိုယ်လုံး အားမရှိတော့သလိုပါပဲရှင်။ ဖေဖေ့ကို အတင်းဖက် ဖေဖေ့ နှုတ်ခမ်းကြီးကို စုပ်နမ်းမိသည်။
“အားးး ဖေဖေ ဆောင့်ပေးပါ ဆောင့်ဆောင့် အားးးးးးးးး ရှီးးးး”
“ကောင်းလိုက်တာ မခင်အေးရာ ရှီးးး ကြပ်ထုတ်နေတာပဲ”
ဖေဖေ ဖင်ကြီးမြှောက်ကာ ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆောင့်လိုးပေးသည်။ ကျမလည်း ပြီးထားပေမယ့် ထပ်ပြီးရွလာကာ ဖေဖေ့လီးကို ကျမဖင်ကော့ကာ စောက်ဖုတ်နဲ့ လိုက်ညှစ်ညှစ်ပေးနေမိသည်။ ဖေဖေလည်း ကျမကိုနမ်းရင်း နို့တွေကို ညှစ်လိုက် စို့လိုက်နဲ့ လီးကြီးကိုလည်း စောက်ဖုတ်လေးထဲ တဖောင်းဖောင်း လိုးသွင်းနေတော့သည်။
“အားးးး ကောင်းလိုက်တာကွာ မအောင့်နိုင်တော့ဘူး ရော့ရော့ ငါလိုးမစောက်ဖုတ် စီးပိုင်နေတာပဲ ညှစ်တယ် ညှစ်ညှစ် ဟားးးး ပြီး ပြီးပြီကွာ အားးးးး”
ဖေဖေ့ပါးစပ်က စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေ ထွက်လာပြီး ကျမကို အတင်းဆောင့်ဆောင့်လိုးကာ သားအဖနှစ်ယောက် တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ပြီးသွားရသည်။ ပြီးလို့ တော်တော်လေး ကြာသည်အထိ ဖေဖေ့လီးကို ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲက မထုတ်။ ဖေဖေကိုယ်လုံးကြီး လေးပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ လေးချင်သလောက်လေးပါစေ ခံနိုင်သည်။
“ချစ်လိုက်တာ မိန်းမရယ် ကောင်းလိုက်တာ စီးနေတာပဲ ဟားးးး”
“သမီးလည်းကောင်းတယ် ဖေဖေရယ် ဟင်းဟင်း ဟင်းးး သမီးကို အမြဲလိုးပေးနော်”
“မိန်းမကလည်း ဘာသမီးတုန်း သမီးက သူ့အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတယ်လေ”
“ဖေဖေရယ် ဖေဖေလိုးနေတာ သမီးကိုပါ မေမေ့ကို မဟုတ်ဘူးလေ ဟင့် ဟင့်”
ကျမလည်း ဖေဖေကျမကို လိုးပြီးတဲ့အထိတောင် မေမေနဲ့ မှားနေတုန်းမို့ ငိုမိသည်။ ဖေဖေနည်းနည်း အမူးပြေချင်လာလားမသိ။ ကျမ ငိုသံကြားတော့မှ မျက်လုံးကို အတင်းဖွင့်ကာ ပွတ်ပြီး ကြည့်တော့သည်။
“ဟင် သမီးးး ဟာ သွားပါပြီကွာ ဖေဖေတို့ ခွေးဖြစ်ပြီ ဟာ သမီးရယ်.. ဖေဖေ… မကောင်းဘူးကွာ”
ဖေဖေ အလန့်တကြား ကုန်းထဖို့လုပ်တော့ ဖေဖေ့လီးကြီးကို စွဲလမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျမ ဖေဖေ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်လေးထဲက အထုတ်မခံနိုင်တော့။ ဖေဖေ့လီးကြီးကပေးတဲ့ အရသာကို ထပ်လိုချင်သေးသည်။ အဲ့တော့ ဖေဖေ့ ခါးပေါ်တင်ကာ ခွထားတဲ့ ခြေထောက်ကို မလွှတ်ဘဲ ချိတ်ထားကာ ဖေဖေ့ကျောကို အတင်းဖက်ထားလိုက်သည်။
“မထပါနဲ့တော့ ဖေဖေရယ် အီးးးဟီးးးဟီးးးး”
“ဖေဖေမှားပြီ ဖေဖေမှားပြီ ဖေဖေခွေးဖြစ်ပြီ ဟာကွာ”
“အီးးး ဟီးးး ဟီးးးး ဖေဖေ အခုမှတော့ မထူးတော့ပါဘူး ဖေဖေရယ်… သမီးက ဖေဖေ ပန်းဦးချွေလိုက်လို့ အပျိုဘဝကနေ ဖေဖေ့ မယားဘဝ ရောက်နေပါပြီ… မှားပြီးကိစ္စတစ်ခုကို ပြန်တွေးမနေပါနဲ့တော့ သမီး ဖေဖေ့ကိုချစ်တယ် ဖေဖေလိုလည်းချစ်တယ် ယောကျာ်းလိုလည်း ချစ်တယ် ”
“အာ သမီးရယ် ဖေဖေတို့ ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူး… ဖေဖေတို့က သားအဖလေ… လူတွေက ဝိုင်းပြောကြမှာပေါ့ သမီးရယ်… တသက်လုံး သိက္ခာရှိရှိနဲ့ နေလာတဲ့ ဖေဖေနဲ့ သမီးဘဝက ဖေဖေဖျက်ဆီးလို့ ပျက်ဆီးကုန်ပြီ”
“ဖေဖေ သမီးကို မချစ်ဘူးလားဟင် ”
“ချစ်တာပေါ့ သမီးရယ်… သမီးမေမေ ဆုံးပြီးကတည်းက သမီးလေးက ဖေဖေ့ဘဝ ဖေဖေ့ကမ္ဘာပဲလေ ”
“အာ့ဆို သမီးကို မယားလိုရော မိန်းမလိုရောချစ်ပါ ဖေဖေရယ်… မငိုနဲ့တော့နော် ငိုနေလို့ သမီးတို့ဘဝက အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်မှာမှ မဟုတ်တော့တာ…. ရှေ့ဆက်မယ် သမီးနဲ့ဖေဖေ လင်မယားလိုရော သားအဖလိုရောနေကြမယ်… ဖေဖေ့အတွက် သားသားမီးမီးလေးတွေ မွေးပေးမယ်”
“သမီးရယ် ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ လူဘုံအလယ်မှာ ပြောစရာ ဖြစ်လာမှာ ”
“မဖြစ်အောင် သမီးတို့ကြံမယ် ဖေဖေ… လူအမြင်မှာ သားအဖ နှစ်ယောက်ထဲဆို လင်မယားလိုနေကြမယ်… ကလေး အဖေနာမည် အစားထိုးလုပ်ဖို့ သမီးကို ကြောင်နေတဲ့ ငတိတစ်ကောင်ကို လှည်းကျိုးထမ်းခိုင်းမယ်”
“ဖေဖေ့အတွက် သမီးအရာရာ ရင်ဆိုင်ရဲတယ်… ဖေဖေ့လီးကြီးကပေးတဲ့ အရသာကို သမီးအရမ်းစွဲလမ်းသွားပြီ… အခု သမီးကို လိုးပေးဦးနော်”
ကျမနဲ့ဖေဖေ ထပ်လျက်သား စကားပြောကြတာ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားသည်။ နောင်ကိစ္စနောင်ရှင်း အခု လောလောဆယ်တော့ လီးတစ်ချောင်းကပေးတဲ့ အရသာကို ထပ်ပြီး ခံစားချင်သေးသည်။ ထပ်ပြောရရင် အဖေအရင်းရဲ့ လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို လိုးပေးတာ ခံချင်သေးသည်။ ကျမရော ဖေဖေပါ စကားလုံးတွေကို ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း ပြောလာကြသည်။
အရင်က ဒီလိုဏှာစကားပြောဖို့ဆိုတာ အိမ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဖူးပါ။ ဖေဖေနဲ့ မပြောနှင့် ကျမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တောင် မပြောခဲ့ဖူး။ အခုတော့ ဖေဖေ့လီးကြီးကပေးတဲ့ အရသာကို စွဲလမ်းမိပြီး ပါးစပ်က စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေ ထွက်လာသည်။ ဖေဖေ့ကို မော့ကြည့်ပြီး ကြာပါပါ မျက်လုံးလေးနဲ့ ကြည့်ကာ ဖေဖေ့ကို မြူဆွယ်နေမိသည်။
ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှာ မာယောင်ယောင် ဖြစ်နေတဲ့ ဖေဖေ့လီးကြီးကို စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေနဲ့ ညှစ်ညှစ်ပေးလိုက်တော့ မကြာပါဘူး ဖေဖေ့လီးကြီး မာထန်လာသည်။ ကျမကို ဖေဖေ သေချာစိုက်ကြည့်ကာ တစ်ခုခု ဆုံးဖြတ်နေဟန်တူသည်။ ပြီးတော့ ဖေဖေ့ခေါင်းကြီး ငုံ့လာကာ ကျမနှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းတော့သည်။
“အင်းးး ဖေဖေ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီသမီး… သမီးက ဖေဖေ့မိန်းမ ဖြစ်ရမယ်.. သမီးကို နေ့ည လိုးမယ်… ဗိုက်ကြီးအောင် လိုးပစ်မယ်…. ညှစ်လွန်းတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လိုးခွဲပစ်မယ်… ချစ်တယ် သမီးရယ်”
“ဖတ် ပလွတ်ပြွတ်ဗြွတ် ဘလွတ်ဘွတ် ဖန်းဖန်းဖန်း ဖန်းဖန်းဖန်း ”
“အားးး ဖေဖေ ရှီးးးး ဖေဖေ့လီးကြီးးး အီးးး ကောင်းလိုက်တာ အင်းးး
လိုးပေးဖေဖေရယ် သမီးစောက်ဖုတ်ကဖေဖေ့အတွက်ပဲ ကာဗာလင်ယူရင်တော့ သူ့ကိုသိပ်အလိုးမခံဘဲ ဖေဖေနဲ့ပဲလိုးမယ် အားးးးရှီးးး”
“ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် ပြွတ်ဘလွတ် ”
“ဟင့် ဟင့် ဖေဖေ ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ ဟင့် ဆက်လိုးပေးလေ”
ဖေဖေဆက်မလိုးဘဲ ကုန်းထကာ လီးဆွဲထုတ်သည်။ ဖေဖေ့လီးကြီး ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှ ထွက်သွားတော့ ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး ကျန်ခဲ့သည်။ ဖေဖေက ကျမပေါင်တံ ဖွေးဖွေးစင်းစင်းလေးတွေကို ကိုင်ကာ ဆွဲကားပြီး ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို ငုံ့ကြည့်ကာ ခေါင်းငုံ့ပြီး ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို ကုန်းယက်တော့သည်။
“လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကွာ ရှလူးးး ပြွတ်ပလွတ် ပြွတ်ပြွတ်”
“အားးးး ဖေဖေ ရှီးးးး အီးးး မယက်နဲ့လေ အဟင့် အားးးး အင်းးးးး”
ကျမတားပေမယ့် ဖေဖေကမရ။ ကျမပေါင်လေးကို ဖိကိုင်ကာ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို တစ်ပြွတ်ပြွတ် စုပ်ပေးသည်။ အစိလေးကိုလည်း ငုံကာ စုပ်ပေးသည်။ ကျမ ကျဉ်တက်လာပြီး သေးပါထွက်ချင်လာသည်။ ဖေဖေခေါင်းကိုကိုင်ကာ ဆွဲဖယ်ပေမယ့် မဖယ်။
“အားးး ရှီးးးး ဖေဖေ ကျဉ်တယ် ရှီးးး သေးတွေထွက်ကုန်မယ် ဖေဖေ အားးးး မယက်ပါနဲ့တော့ အားးး”
“ယက်လို့ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ် ချိုနေတာပဲ ဒီအနံ့လေးကို ဖေဖေမရတာ နှစ်ချီနေပြီ ပြွတ်ပြွတ် ပလပ် ပလပ် ပလပ် ပြွတ် ”
ကျမခါးလေး ကော့ပေးမိကာ ဖေဖေ့မျက်နှာကို စောက်ဖုတ်လေးနဲ့ အတင်းကပ်မိသည်။ ဖေဖေယက်ပါစေဆိုပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ ယွစိယွစိနဲ့ ဖေဖေလျှာကြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲ ဝင်ထွက်နေတာကို ခံစားနေလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ယက်ခံရတာလည်း ကောင်းလွန်းသည်။ ဖေဖေက သူစိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိ စောက်ဖုတ်ကိုယက်ပြီး ချက်ခြင်းထကာ ကျမပေါင်လေးကို အပေါ်ဆွဲတင်ကာ ဖိချပြီး စောက်ဖုတ်ဝ လီးတေ့ကာ လိုးတော့သည်။
“ဗြွတ် တစ်တစ် ဗလစ် ဗြွတ်ဗြွတ် ဘွတ်ဘွတ် ဒုတ်”
“အအအ ဖဖေ အီးးးး အားးးးး နာတယ် ရှီးးးးး”
ခုနကမှ ပါကင်ဖောက်ထားရတဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို သူ့လီးကြီးနဲ့ တစ်ချက်ထဲ အဆုံးလိုးသွင်းလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်အယက်ခံရလို့ မတရား ယားနေတဲ့ ကျမ ကောင်းနေတုန်းမှာပဲ လီးကြီးစောက်ဖုတ်ထဲ အပြည့်အသိပ် တိုးဝင်လာတော့သည်။ ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲ ဖေဖေ့လီးကြီး ပြည့်ကြပ်နေသည်။
လီးကြီးဝင်ထွက်တိုင်း ကျမစောက်စိလေးကို ခလုတ်တိုက်သွားတော့ အရမ်းကို ကောင်းလွန်းသည်။ အသဲခိုက်အောင် ကောင်းသည်။ ဖေဖေဆောင့်ချရင် ကျမဖင်ပြန်ကျလာသလို လီးကြီးပြန်ထွက်ရင် ကျမဖင်ကော့ပြီး လီးကြီးကို စောက်ဖုတ် အတွင်းသားတွေနဲ့ လိုက်ညှစ်နေမိသည်။
ဖေဖေ့လီးကြီးရဲ့ ပွတ်တိုက်မှုကို မခံနိုင်ပါ။ စောက်ခေါင်းထဲက လှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ ယားလာပြီး ဖေဖေ့ဗိုက်ကို စောက်ရည်တွေ တဗြန်းဗြန်း ပန်းထုတ်မိတော့သည်။
“ဖေဖေ အားးး ဖေဖေရေ အားးး ဆောင့်လိုးပေးပါ အားးးး ပြီးပြီ အားးးးး ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖေဖေ့လီးကြီး အီးးး ရှီးးးးး”
ကျမတကိုယ်လုံး တဇတ်ဇတ်တုန်ကာ ဖေဖေ့လီးကို ဆက်လိုးလို့မရတဲ့အထိ ဆွဲဆွဲညှစ်နေမိသည်။ ကျမ အရှိန်နည်းနည်း လျော့သွားတော့မှ ဖေဖေဆက်လိုးသည်။ အချက် ၃၀ လောက် မနားတမ်း ဆောင့်လိုးသည်။ ဖေဖေ့လိုးချက်တွေက အားပါလှသည်။ သမီးအရင်းကို လိုးနေရလို့ပဲ အားတွေစိုက်နေလားမသိ။
ကျမလည်း အဖေအရင်းရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးတာကို ခံနေရတယ်လို့ တွေးမိပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်ယွလာသည်။ ကျမလည်း ဖင်ကို အတင်းကော့ကော့တင်ကာ စောက်ဖုတ်နဲ့လီးကို လိုက်ဆွဲညှစ်ပေးသည်။ အပေးအယူမျှမျှနဲ့ သားအဖနှစ်ယောက် လိုးဆောင့်ကြသည်။
“ဟားးး အားးး ကောင်းလိုက်တာ သမီးလေးရယ်… အီးးးး ရှီးးးး ဟူးးးးးး ငါလိုးမ သမီးလေးစောက်ဖုတ် လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာကွာ အား အား”
ဖေဖေလည်း ပြီးချင်လို့လားမသိ ကျမနို့လေးကို ကုန်းစို့ကာ ဖင်ကြီးမြှောက်မြှောက်ပြီး တဗြောင်းဗြောင်း ပစ်ပစ်ဆောင့်လိုးချသည်။ ဖေဖေ့ ဂွေးဥကြီးနှစ်လုံးက ကျမဖင်လုံးလေးကို တဖတ်ဖတ် ရိုက်ခတ်နေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် စူပွပွဖြစ်နေတဲ့ ဖင်ဝလေးကိုပါ လာထိသည်။
ဖေဖေ ကျမနို့စို့နေရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို ကူးလာကာ ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်နမ်းပြီး ဂွေးဥတွေပါ စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်မတတ် ကြုံးကြုံးဆောင့်လိုးပြီး သားအိမ်ဝ လီးဆိုက်ကာ ပူနွေးနွေးလရည်တွေ အားပြင်းပြင်းနဲ့ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။
“ချစ်တယ် သမီးရယ် ဖေဖေ့မိန်းမလေး အရမ်းချစ်တယ်”
“သမီးလည်း ဖေဖေ့ကို အရမ်းချစ်တယ် ယောက်ျားရယ် သမီးနဲ့ဖေဖေ သက်ဆုံးတိုင် လိုးသွားကြမယ်နော်”
“ဒါပေါ့ သမီးရယ် ဖေဖေတို့ ကလေးလေးတွေ အများကြီး မွေးကြမယ်”
“ဟုတ် ဖေဖေ ပြီးရင် ထပ်လိုးဦးမှာလား ဖေဖေ”
“သမီးလေးက ခံနိုင်သေးတယ်ဆို ဖေဖေက လိုးပြီးသားပဲလေ သမီးစောက်ဖုတ်လေးထဲက ဖေဖေလီးကို မချွတ်တမ်း လိုးချင်တာ”
“ဟုတ် လိုး အခုတော့ ခဏနားဦးမယ်နော် ဖေဖေ သမီးသေးပေါက်ချင်လို့ နောက်ပြီး ပေပွနေတာတွေပါ ဆေးချင်လို့”
“အင်း သွားလေ သမီး ဖေဖေလည်းလိုက်မယ်”
“ဘွတ် ဘလွတ် ပွက်”
ကျမပါးလေးကို ဖေဖေ့နှာခေါင်းမြုပ်သွားအောင် နမ်းပြီး ဖေဖေထကာ လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ အပျိုစင် ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို နှစ်ခါဆက်တိုက် လိုးထားတာတောင် ဖေဖေ့လီးက ပျော့မကျသွားဘဲ မာယောင်ယောင် ရှိနေသေးသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ မလိုးခဲ့ရဘဲ အောင့်အီးသည်းခံ နေခဲ့ရလို့လားမသိ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲက မထုတ်ချင်ထုတ်ချင်နဲ့ ထုတ်ပေးသည်။ ကျမလည်း အခုမှ လီးအရသာကို နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ခံစားရပြီဆိုတော့ စွဲလမ်းမိသည်။
ကိုယ့်အဖေအရင်းက လိုးပေးလို့လားမသိ ပိုလို့တောင် ရင်ခုန်မိသည်။ ဒီလိုနဲ့ ဖေဖေမူးပြီး ကျမကို တက်လိုးတဲ့ နေ့ကစပြီး ဖေဖေနဲ့ကျမ သားအဖဆိုတဲ့ အတားအဆီးကြီးကို ဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ကြပြီး နေ့တိုင်း ညတိုင်းလိုလို လိုးဖြစ်ကြတော့သည်။
လူသူရှိရင် သားအဖလို နေကြပြီး နှစ်ယောက်ထဲရှိတာနဲ့ ဖေဖေ့လီးကိုကိုင်ဆွကာ မထသေးရင် ဇိမ်ဆွဲပြီး စုပ်ပေးတတ်သလို ဖေဖေကလည်း အားတာနဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို နှိုက်ကာ နို့လှန်စို့တတ်သည်။ ဖေဖေနဲ့ကျမ ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံလိုပဲ အချိန်ရတိုင်း လိုးနေမိသည်။
နေမကောင်းတာ အကြောင်းပြပြီး သုံးရက်လောက် ခွင့်ယူကာ ဖေဖေနဲ့ အိမ်ထဲအနှံ့ လိုးကြသည်။ ဖေဖေကလည်း မိတ္တူဆိုင်ကိုပိတ်ကာ ကျမနဲ့ သားအဖနှစ်ယောက် အိမ်ထဲမှာ ဟန်းနီးမွန်းကြသည်။ ဘုရားခန်းကလွဲပြီး အိမ်ထဲမှာ နေရာအစုံ လိုးကြသည်။ ရေချိုးတော့လည်းတူတူ အိမ်သာတက်လည်းတူတူ ဘာပဲလုပ်လုပ် တူတူလုပ်ကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆွကာ လိုးကြသည်။
ဖေဖေသင်ပေးလို့ သုံးရက်အတွင်း ကျမ ဖေဖေ့အကြိုက် လီးကောင်းကောင်း စုပ်တတ်သလို ဖင်လည်း ခံတတ်နေပါပြီ။ နောက်ရက်တွေလည်း အလုပ်မသွားခင်တစ်ခါ ညနေအိမ်ရောက်လို့ လူလစ်ရင်လိုး မလစ်ရင် ခိုးပြီး စုပ်ကြယက်ကြသည်။
ဒီလိုနဲ့ လိုးကြခံကြနဲ့နေလာရင်း ၂ လ ကျော်လာတော့ ကျမ ရာသီမလာတော့။ ပျော်လည်းပျော်သလို ဝမ်းလည်းနည်းရသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုသိလို့ ကျမကို တစ်ဖက်သတ် ကြိုက်နေတဲ့ မန်နေဂျာကို အထာပေးကာ တကယ်ကြိုက်တယ်ဆို ဖေဖေ့ဆီမှာ လာတောင်းဖို့ ပြောထားလိုက်သည်။
ကိုဇော်ထက်လည်း ချက်ခြင်းကို စီစဉ်ပြီး လူကြီးစုံရာနဲ့ လာတောင်းတော့သည်။ ဖေဖေနဲ့ ကျမက စည်းဝါးကိုက်ထားပြီးသားမို့ ကိုဇော်ထက် လာတောင်းရမ်းတာကို ဖေဖေက အလွယ်တကူ လက်ခံသည်။ သူ့ကျန်းမာရေးက ရှိသေးလို့ မြန်မြန် မင်္ဂလာဆောင်ကြဖို့ ပြောတော့ ကိုဇော်ထက် မိဘတွေကပါ လိုလိုလားလားနဲ့ လိုက်လျောကြသည်။
အဲ့နေ့က ကိုဇော်ထက်တို့ ပြန်သွားပြီး သားအဖနှစ်ယောက်ထဲ ကျန်တော့မှ ဖက်ငိုကြသည်။ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာလို့ ပျော်ကြပေမယ့် သားအဖနှစ်ယောက် အရင်လို တူတူအိပ် တူတူစားပြီး အေးအေးဆေးဆေး လိုးလို့ရမှာ မဟုတ်လို့ ဝမ်းနည်းရသည်။
“သမီးရယ် ဖေဖေ ပျော်လည်းပျော်တယ် ဝမ်းလည်းနည်းတယ်.. နောက်ဆို ဖေဖေနဲ့သမီး အမြဲလိုးချင်တိုင်း လိုးလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး”
“သမီးလည်း ထပ်တူပါပဲ ဖေဖေရယ် ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့ ဖေဖေရယ်.. သမီးတစ်ကိုယ်လုံးက ဖေဖေ့အတွက်ပါ ။ သူလစ်တာနဲ့ ထဘီသာလာလှန်လိုး ဖေဖေ့အလိုးကို သမီးက ခံပြီးသားပဲ”
“သမီးလည်း ဖေဖေ့ကိုချစ်တယ် ”
ဖေဖေက တစ်လလောက်ပဲ အချိန်ရတော့လို့ အချိန်ရတိုင်း လိုးနေတော့သည်။ ကျမဘဏ်ပိတ်တာနဲ့ သူ့မိတ္တူဆိုင်ကိုပါပိတ်ပြီး တစ်နေကုန် တညလုံး လိုးဖြစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း မင်္ဂလာဆောင်နေ့က နီးကပ်လာပြီး ကျမလည်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့သည်။ အရာရာက စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ကွက်တိပင်။
ကျမနဲ့ ကိုဇော်ထက် မင်္ဂဆောင်တော့ ဖေဖေ လူမသိသူမသိ မျက်ရည်ကျနေတာ တွေ့ရသည်။ ညအိပ်တော့လည်း ဖေဖေ အိပ်မပျော်တာ သိသည်။ ကိုဇော်ထက်က မူးမူးနဲ့ ထဘီလှန် တက်လိုးပြီး တခေါခေါ အိပ်ပျော်သွားတော့ ကျမလည်း ဖေဖေ့အခန်းဆီကူးကာ ဖေဖေ့ကို နှစ်သိမ့်ပေးရသည်။
ကိုဇော်ထက်လီးက လူစဉ်မှီပေမယ့် မူးနေလို့လားမသိ ကျမကို ပြီးအောင် မလိုးပေးနိုင်။ အဲ့တော့ ဖေဖေ့ဆီသွားတာ တညလုံးနီးပါး အလိုးခံပစ်သည်။ မနက် လေးနာရီထိုးခါနီးမှ ထကာ ကိုဇော်ထက်နဲ့ ပြန်ဝင်အိပ်သည်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ကိုဇော်ထက် လစ်တာနဲ့ ဖေဖေ့အလိုးကိုခံသည်။
ကိုဇော်ထက်လီး လူစဉ်မှီပြီး လိုးနိုင်ပေမယ့် ကျမကတော့ ကျမအချစ်ဦး ဖေဖေ့လီးကိုပဲ စွဲလမ်းမိသည်။ နောက် ၂ လလောက်ကြာတော့ ကျမမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဆိုတာ ကိုဇော်ထက်ကို ပြောပြတော့ သူကပျော်နေကာ ဆေးခန်းလိုက်ပြသည်။ သူ လူဖြစ်ပြီ ကလေးအဖေဖြစ်ပြီ ဆိုပြီး ခုန်ပေါက်မြူးထူးနေတော့သည်။
ကျမဗိုက်ထဲက ကလေးအဖေက သူ့ယောက္ခမဆိုတာ သူမသိရှာ။ သနားဖို့တော့ ကောင်းသား။ ကျမ ကိုယ်ဝန်လရင့်လာတော့ သူကကျမကို လိုးဖို့နေနေသာသာ သူလီးတောင်ပြီး စိတ်ကြွနေရင်တောင် သူဘာသာ ဂွင်းထုပစ်တာများသည်။ ကျမလည်း သူ့အပေါ် အပြစ်ရှိသလို ခံစားရတော့ သူ့ကိုလီးစုပ်ပေးကာ ချွေးသိပ်ပေးသည်။
ကိုယ်ဝန်ရင့်လာလေ ကျမလိင်စိတ်က ပြင်းထန်လာလေလေ ဖြစ်လာသည်။ အလုပ်ကလည်း မလုပ်ရတော့ အိမ်မှာ အားနေသည်။ အဲ့တော့ ဖေဖေ့ကိုဆွကာ အလိုးခံသည်။ ဖေဖေလည်း ကျမကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ သိပ်ကြမ်းကြမ်းမလိုးပါ။ ဘေးစောင်းလေး လီးသွင်းကာ စိမ်လိုးလေးလိုးပြီး ဖင်ကို လိုးပေးသည်။
ကျမ ကလေးမွေးတော့ ဖေဖေရော ကိုဇော်ထက်ပါ ပျော်နေသည်။ သူတို့ဆီမှာ အတွေးကိုယ်စီနဲ့ကိုး။ ကလေးက ကိုယ်ဝန်ရှစ်လကျော်နဲ့ မွေးပေမယ့် ကိုဇော်ထက်နဲ့ အများက သိတာက ၇ လ ကျော်ပေါ့။
သမီးလေးက ဖေဖေနဲ့ ချွတ်စွပ်တူသည်။ ကျမကလည်း ဖေဖေနဲ့တူတော့ သံသယ မရှိကြဘူးပေါ့ရှင်။ ဒီလိုနဲ့ သမီးကြီး ထက်ဝတီထွန်းမွေးပြီး ကျမ ကိုဇော်ထက်နဲ့ အလိုးခံသလို ဖေဖေနဲ့လည်း အချိန်ရတိုင်း အလိုးခံသည်။
ကလေးရလာပြီး အလုပ်ရှုပ်လာတော့ ကိုဇော်ထက်က ကျမကို အလုပ်မလုပ်ခိုင်းတော့ပဲ အိမ်မှာပဲ နေခိုင်းတော့သည်။ ကျမနဲ့ ဖေဖေလည်း အားအားရှိ လိုးဆော်နေကြသည်။ နောက်နှစ်တွေ ကြာလာတော့ သမီးလေး ဝသန်ဦးနဲ့ သားငယ်အောင်ထက်ဇော် မွေးတဲ့အထိ ကလေးသုံးယောက်ရတဲ့အထိ ကျမနဲ့ ဖေဖေ လိုးကြသည်။ သုံးယောက်စလုံးက ဖေဖေ့ သွေးတွေချည်းပင်။
“ဖေဖေ သမီးတို့ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ပါတယ်နော်”
“ဒါပေါ့ သမီးရဲ့… ရည်မှန်းချက်တွေ ပိုလို့ ပိုလို့ အောင်မြင်သွားအောင် ဖင်ကုန်း သမီး… မြေးသားငယ်လေး မနိုးခင် နောက်တစ်ယောက်ရအောင် အားစိုက်လိုက်ကြစို့”
“လိုးပါဖေဖေ… ဖေဖေလိုးသမျှ သမီးကခံဖို့ အသင့်ပါပဲရှင်”
“ဘွတ်ပလွတ် ဖောက် ဘုဘု ”
“အားးး ဖေဖေရယ် ဖင်ထဲကို ပြည့်သိပ်သွားတာပဲ”
“ကလေးသုံးယောက်ရတာတောင် မပြဲတဲ့ ဖင်နဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို အားတိုင်း လီးတေ့ပြီး လိုးနေဦးမယ်”
“ခစ်ခစ် ဘုဘုဘုဘုဘွတ် အားးးး ကောင်းလိုက်တာ ဖေဖေရယ်.. ဖင်လိုးပြီးရင် လရည် စောက်ဖုတ်ထဲပဲ ပန်းထည့်ရမယ်နော်”
“စိတ်ချပါ သမီးရယ် စောက်ဖုတ်ထဲပဲ သားအိမ်အပြည့်ကို ပန်းထည့်မှာ”
“ယွန်းချစ်တဲ့ ဖေဖေရယ်… ယောက်ျားရေ ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်လိုးပါ… အားးးးး ရှီးးးးးးး”
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 28,586